Abavelisi beemveliso kunye nababoneleli - China iMveliso yeeFektri
SARS-CoV-2 Antigen ikhithi
Uvavanyo lwe-SARS-CoV-2 IgG / IgM olukhawulezayo
IChlamydia / Neisseria Gonorrhoeae
Uvavanyo lweBacteria Vaginosis
Uvavanyo lwe-Strep B Antigen
Vavanya uvavanyo olukhawulezayo
Uvavanyo lwe-Cryptococcal Antigen
Uvavanyo lwe-HSV 1/2 Antigen
Uvavanyo lokuvavanywa komhlaza wesibeleko kunye nomhlaza
Uvavanyo lweRotavirus / Adenovirus
Uvavanyo lweSalmonella Typhi
Uvavanyo lweVibrio Cholerae O1 / O139
Uvavanyo lweVibrio Cholerae O1
Uvavanyo lukaH. Pylori Antigen
Uvavanyo lwe-Pylori Antibody
Uvavanyo olukhawulezayo lwe-PROM
Uvavanyo olukhawulezileyo lweFibronectin
Isisombululo seFungal Fluorescence
Uvavanyo olukhawulezileyo lwe-PROM
Uvavanyo olukhawulezileyo lweFOB
Isixhobo seDia Biosafety System seSARS-CoV-2 Antigen ...
Uvavanyo lweSARS-CoV-2 lwe-Antigen ekhawulezayo
UKUSETYENZISWA KWENJONGO Isixhobo sovavanyo esikhawulezayo seStrongStep® Adenovirus (ilindle) kukujonga ngokukhawuleza okukhawulezayo kokuchongwa komgangatho we-adenovirus kwimizekelo yelindle yabantu. Le khithi yenzelwe ukuba isetyenziswe njengoncedo ekuchongeni usulelo lwe-adenovirus. INTSHAYELELO Ii-adenoviruses ze-Enteric, ikakhulu i-Ad40 kunye ne-Ad41, zezona zinto zikhokelela kurhudo kubantwana abaninzi abanesifo sohudo esiqatha, okwesibini emva kwee-rotaviruses. Isifo sohudo esiqatha sesona sizathu sokufa ...
UKUSETYENZISWA KWENKQUBO IStrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Icebo (ilindle) kukubonwa ngokukhawuleza komgangatho, ukufunyanwa kokuzithemba kweGiardia lamblia kwimifuziselo yabantu. Le khithi yenzelwe ukuba isetyenziswe njengoncedo ekuchongeni usulelo lweGiardia lamblia. INTSHAYELELO Izifo ezosulelwe zizifo zihlala ziyingxaki enkulu ehlabathini. IGiardia lamblia yeyona protozoa ixhaphakileyo eyaziwa ngokuba inoxanduva lwesinye sezona zinto zibangela isifo sohudo ebantwini, ...
Uvavanyo lweH. Pylori Antigen
StrongStep® Uvavanyo lukaH.
INTSHAYELELO Rotavirus yeyona nto ixhaphakileyo ejongene nesifo esibuhlungu segastroenteritis, ngakumbi kubantwana abancinci. Ukufunyanwa kwayo ngo-1973 kunye nokunxulumana kwayo ne-gastro-enteritis yeentsana kubonisa inkqubela phambili ebaluleke kakhulu kufundo lwe-gastroenteritis engabangelwa lintsholongwane ebukhali. Irotavirus idluliswa yindlela yomlomo kunye nelindle kunye nexesha lokufukama leentsuku ezi-1-3. Nangona iisampulu eziqokelelwe kusuku lwesibini nolwesihlanu lwesi sifo zilungile kwi-antigen detectio ...
Izibonelelo ezichanekileyo Ubuntununtunu obuphezulu (89.8%), ubuninzi (96.3%) bungqineke ngovavanyo lwezonyango lwe-1047 ngesivumelwano se-93.6% xa kuthelekiswa nendlela yenkcubeko. Inkqubo elula yokubaleka, akukho sakhono sikhethekileyo siyafuneka. Khawuleza kuphela imizuzu eli-10 efunekayo. Ukugcinwa kobushushu kwigumbi Ukucaciswa kobuntununtunu 89.8% Ukucaciswa kwe-96.3% Ukuchaneka kwe-93.6% CE kuphawulwe Ubungakanani beKit = iimvavanyo ezingama-20 Ifayile: Iincwadana / iMSDS INTSHAYELELO ISalmonella yintsholongwane ebangela olunye losulelo ...
Uvavanyo lwe-Vibrio cholerae O1
INTSHAYELELO Ubhubhane wekholera, obangelwa yi-V. Cholerae serotype O1, iyaqhubeka nokuba sisifo esitshabalalisayo esibaluleke kakhulu kwihlabathi liphela kumazwe asaphuhlayo. Ngokwekliniki, ikholera isenokubakho ukusuka kwi-asymptomatic colonization ukuya kwisifo sorhudo kunye nelahleko enkulu yamanzi, ekhokelela ekuphelelweni ngamanzi emzimbeni, ukuphazamiseka kwe-electrolyte kunye nokufa. V. ikholera O1 ibangela ukuhanjiswa sisisu ngokufihlakeleyo kwamathumbu amancinci kunye nokuveliswa kwetyhefu enamandla yekholera, ngenxa yeklinikhi kunye nesifo ...
Uvavanyo lwe-Vibrio cholerae O1-O139
INTSHAYELELO Ubhubhane wekholera, obangelwa yi-V. Cholerae serotype O1 kunye ne-O139, ziyaqhubeka nokuba sisifo esitshabalalisayo esibaluleke kakhulu kwihlabathi liphela kumazwe asaphuhlayo. Ngokwekliniki, ikholera isenokubakho ukusuka kwi-asymptomatic colonization ukuya kwisifo sorhudo kunye nelahleko enkulu yamanzi, ekhokelela ekuphelelweni ngamanzi emzimbeni, ukuphazamiseka kwe-electrolyte kunye nokufa. I-cholerae O1 / O139 ibangela ukuhanjiswa sisisu ngokufihlakeleyo kwamathumbu amancinci kunye nokuveliswa kwetyhefu yekholera, ngenxa yeklinikhi kunye ...
Uvavanyo lwe-bacterial vaginosis
UKUSETYENZISWA KWENKQUBO IStrongStep® Bacterial vaginosis (BV) Isixhobo soVavanyo olukhawulezayo sinenjongo yokulinganisa i-pH yelungu lobufazi ukunceda ekuchongeni isifo se-Bacterial vaginosis. INTSHAYELELO Ixabiso le-pH ene-asidi yelungu lobufazi elingu-3.8 ukuya ku-4.5 yimfuneko esisiseko yokusebenza ngokukuko kwenkqubo yomzimba yokukhusela ubufazi. Le nkqubo inokuyiphepha ngokufanelekileyo ikholoniyali ngamagciwane kunye nokwenzeka kosulelo lobufazi. Olona khuselo lubalulekileyo nolona lubalulekileyo kwindalo yelungu lobufazi ...
INTSHAYELELO IVulvovaginal candidiasis (WC) kucingelwa ukuba sesona sizathu sixhaphakileyo seempawu zelungu lobufazi. Phantse, iipesenti ezingama-75 zabasetyhini ziya kufunyaniswa zineCandida ubuncinci kube kanye ngexesha lokuphila kwabo. I-40-50% yabo iya kuba nosulelo oluphindaphindiweyo kwaye iipesenti ezintlanu ziqikelelwa ukuba ziphuhlise iCandidiasis engapheliyo. I-Candidiasis ihlala ichaneke ngakumbi kunolunye usulelo lobufazi. Iimpawu ze-WC ezibandakanya: ukurhawuzelela okukhulu, ukukhathazeka kwilungu lobufazi, ukucaphuka, irhashalala kwimilebe yangaphandle yelungu lobufazi ...
IChlamydia kunye neNeisseria gonorrhoeae
INTSHAYELELO Isifo seGonorrhea sisifo esosulela ngokwabelana ngesondo esibangelwa yintsholongwane iNeisseria gonorrhoeae. I-Gonorrhea sesinye sezifo ezibangelwa ziintsholongwane kwaye sihamba kakhulu ngexesha lokwabelana ngesondo, kubandakanya ubufazi, umlomo kunye nokwabelana ngesondo ezimpundwini. Umzimba we-causative ungosulela umqala, uvelise umqala obuhlungu. Inokuchaphazela i-anus kunye ne-rectum, ivelise imeko ye-d ebizwa ngokuba yi-proctitis. Ngabantu ababhinqileyo, inokosulela kwilungu lobufazi, ibangele ukucaphuka ngamanzi (...
I-StrongStep® Chlamydia trachomatis yovavanyo olukhawulezileyo kukuhamba ngokukhawuleza kwe-immunoassay yokufumana ubungqongqo obunobunkunkqele beChlamydia trachomatis antigen kwi-urethral yamadoda kunye ne-swab yomfazi wesibeleko. Izibonelelo Imizuzu eyi-15 elula kunye nekhawulezayo efunekayo, ukuthintela uloyiko olulinde iziphumo. Unyango olufike ngexesha elifanelekileyo Ixabiso eliphezulu lokuxelwa kwangaphambili kweziphumo ezilungileyo kunye nokucaciswa okuphezulu kunciphisa umngcipheko we-sequelae kunye nokuhambisa ngakumbi. Kulula ukusebenzisa inkqubo enye, akukho zakhono zikhethekileyo ...
UKUSETYENZISWA KWENKQUBO Isixhobo seStrongStep® Cryptococcal Antigen Rapid Test sisixhobo esikhawulezayo sokuvavanya i-immunechromatographic yokufumanisa i-capsular polysaccharide antigens ye-Cryptococcus species complex (i-Cryptococcus neoformans kunye ne-Cryptococcus gattii) kwi-serum, iplasma, igazi elipheleleyo kunye ne-cerebral spinal fluid (CSF). I-assay lunyango olusebenzisayo lokwenza uvavanyo lwelebhu olunokunceda ekuchongeni i-cryptococcosis. INTSHAYELELOI-Cryptococcosis ibangelwa zizo zombini iintlobo ze-Cryptococcus com ...
Inombolo 12, Huayuan Road, Nanjing, Jiangsu, 210042 PR CHINA
Copyright © 2016-2020: Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushu - Imephu yendawo
H. Pylori Ag Uvavanyo olukhawulezayo lubhaqa i-Antigen, Ikhithi yovavanyo lwe-Igm / Iggrapid, Inoveli Coronavirus Rapid Uvavanyo Ket, ICoronavirus yovavanyo lweCovid-19, ICoronavirus Antigen yovavanyo lweKhithi, Vibrio Cholerae O1 / O139 Uvavanyo lwe-Antigen Combo Rapid,